ROA LAHY NISANDOKA HO FIANAKAVIAN’NY KAOMISERA : Tra-tehaka nisoloky 1 400 000 ariary
Ny fiatombohan’ny herinandro teo, tra-tehaky ny Polisy misahana ny filaminam-bahoaka tao an-tampon-tanànan’ Ambohimahasoa ireo roa lahy nisandoka ho fianakavian’ny Kaomiseran’ny Polisy tao an-toerana. 17 avril 2019
Milaza ny ho mahatafavoaka ireo olona voasambotry ny Polisy ka afaka madiodio ireto olon-dratsy ireto ary takian’ny volabe amina an-tapitrasany ny olona izay roboka amin’izany. Fantatra tamin’ny loharanom-baovao voaray ary fa fianakaviana voarohirohy tamin’ny tranga fanafihana tany Mananjary, nahaverezana vola iray tapitrisa ariary ny volana marsa lasa teo, tompon’antoka tamin’ny vaky trano tao amin’ity tanàna ity ihany koa no voalaza fa nosolokian’ireto roa lahy ireto.
Nangalan’izy ireo vola mitentina efatra hetsy sy roa tapitrisa ariary ny fianakaviana satria dia nandaingan’ireto farany fa olona akaiky ny kaomisera ary mahavita manafaka sy manala madiodio ny raharaha nahavoasaringotra ireto olon-dratsy. Natoky azy ireo tokoa ny fianakaviana ka dia nanome ny lelavola notadiavina. Taorian’izay anefa dia tafatsoaka ireto mpisoloky ary nanao fitarainana ny nanome ny vola ka raikitra fikarohana. Tsy ela dia tratra ireto mpisandoka ireto. Mitohy ny famotorana lalina ny zava-misy, rehefa vita izany dia hiakatra fampanoavana ny raharaha.
Hentitra amin’ny fanaovana kolikoly ny Polisim-pirenena
Manoloana ny firongatry ny fampanjakana ny kolikoly, amin’ny lokony maro lafy dia hentitra dia hentitra ny eo anivon’ny Polisim-pirenena ny amin’ny fanafoanana izany. Tsy hanaiky moramora ireo izay olona tratra izy ireo fa dia mihatra avy hatrany ny sazy henjana manaraka ny lalàna mifehy. Tsy azo tsinontsiniavina rahateo koa fa anisany ady goavana sorohan’ny fanjakana mijoro ankehitriny ny ady amin’ny kolikoly.